«La Cité d’Espérance » : Akamasoa tantaraina amin’ny saripika -
AccueilVaovao Samihafa«La Cité d’Espérance » : Akamasoa tantaraina amin’ny saripika
04/12/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Niainga avy amin’ilay boky « La cité d’espérance de Père Pedro», ary vao navoakan’ny trano mpanota boky Rocher vao haingana. Manomboka anio, ary haharitra hatramin’ny 22 desambra izao ny fampirantiana saripika hitantarana ny zava-misy iainana eny amin’ny akamasoa, tanàna natsangan’i Père Pedro hitsinjovana ireo fianakaviana sahirana. Saripika sangan’asan’i Rijasolo, ary ahitana ny asa soratr’ilay mpanoratra frantsay Pierre Lunel, nanoratra io boky io. Hita taratra ao anatin’ireo saripika ireo ny fiainan’ireo mponina ao amin’ny Akamasoa. Tanàna izay nahitana taratra ny fandraisana amin’ny maha olona, ny fametrahana ny firahalahiana, ary ny fifanampiana eo amin’ny samy mpiara-monina.
Sady mpaka sary no mpanao fanadihadiana i Rijasolo. Anisan’ireo mpiara-miasa amin’ireo gazety vahiny toa ny Le monde, Jeune afrique, Libération… izy. Mpaka sary an-gazety ao amin’ny AFP, na ny Agence Française de Presse ihany koa. Rijasolo ihany koa no tompomarika tamin’ilay rakitsary « Madagascar, nocturnes » navoakan’ny No Coment, ary sangan’asany ihany koa no mandraka ilay boky « Akamasoa, rêves d’enfants » an’i Père Pedro.
Anisan’ny manavanana ilay mpanoratra Pierre Lunel kosa ny fitantarana ny mombamomba ireo olona nitondra ny anjara birikiny, teo amin’ny sehatra ara-panahy sy ny olombelona. Ankoatra ny « La cité d’espérance de Père Pedro », dia asa sorany ihany koa ny « L’insurgé de Dieu » nataony ho an’i Abbé Pierre. Toa izany koa ny « Sœur Emmanuelle, secrets d’une vie » sy ny « Je m’appellera François », izay mitantara ny momba ny Papa François.
Nandritra ny lanonana fanokafana ny fampirantiana omaly no nampahafantarana ihany koa io boky io. Hisy kosa ny fihaonana amin’ny mpanoratra Pierre Lunel, rahampitso amin’ny 10 sy sasany maraina, ka hitantarany ny fomba fanorany rehefa mitantara olona toa an-dry Père Pedro. Izy telo mianaka: Rijasolo, Pierre Lunel ary Père Pedro kosa ny 11 desambra izao no hitondra famelabelarana momba ny « Akamasoa ».